Chii chinonzi Kupararira mu Forex - Kupararira mu Forex Kutengesa Kunotsanangurwa
dzidzo - Zvinyorwa & Tutorials - forex basics nyaya - Chii chinopararira mune Forex Kutengesa?
Iwo mabroker anoita mari nekutengesa mari kune vatengesi kune zvakawanda kupfuura zvavanobhadhara kuti vatenge.
Iwo mabroker anoitawo mari nekutenga mari kubva kune vatengesi pane zvishoma pane zvavanobhadhara kuti vatengese.
Uyu mutsauko unonzi kupararira.
Zvinopararira zvinoreva chii?
Iko kupararira kuno kuyerwa maererano ne pips inova chidimbu chidiki chekufamba kwemutengo kwepari yemari. Iyo yakaenzana ne0.0001 (yechina chinongedzo point pamutengo wequote). Izvi ndezvechokwadi kune mazhinji makuru pairi apo veJapan Yen pairi vane yechipiri danho poira sepombi (0.01).
Kana iko kupararira kwapararira, zvinoreva kuti musiyano uri pakati pe ”Bhira” uye “Bvunza” wakakwira. Nekudaro, iyo kusasimira kuchave kwakakwira uye kuve kwakakwirisa kuchaderera. Kune rimwe divi, kupararira kwakadzika kunoreva kuderera kwakadzika uye kwakakwira kuderera. Nekudaro, iyo mari yekuparadzira ichave iri diki kana mutengesi akatengesa joera yemari nekupararira kwakasimba.
Kunyanya mari pairs haina komisheni yekutengesa. Saka kupararira ndiyo chete mutengo unofanirwa kutakurwa nevatengesi. Mazhinji evabhuroka e forex haabhadharise komisheni; saka, ivo vanowana nekuwedzera kupararira. Ukuru hwekupararira hunoenderana nezvinhu zvakawanda sekusimba kwemusika, broker mhando, yemari vaviri, nezvimwe.
Kupararira kunoenderana nei?
Chiratidzo chakapararira chinowanzoiswa muchimiro chejika pane girafu chinoratidza mafambiro ari kupararira pakati pemitengo "Bvunza" uye "Bhira". Izvi zvinogona kubatsira vatengesi kuona nekupararira kwemari mbiri pane nguva. Iwo akanyanya kunyorova maviri ane yakapararira yakasimba apo exotic vaviri vane yakapararira.
Mumazwi akareruka, kupararira kunoenderana nekutenga kwemusika kwechinhu chakapihwa zvemari, zvichidaro, iyo yakakwira mari yekubatana yemari, iyo diki ichipararira. Semuenzaniso, EUR / USD vaviri ndiyo yakatengeswa zvakanyanya; saka, iyo kupararira muEUR / USD vaviri ndeye yakaderera pakati pevamwe vese mairi. Ikozve kune mamwe makuru makuru maviri akaita seUSD / JPY, GBP / USD, AUD / USD, NZD / USD, USD / CAD, etc. Panyaya yepasiripo, kupararira kwakawanda kakawanda kana zvichienzaniswa nemaviri makuru uye izvo zvese nekuda kwehurefu hwekunyungudika mumamwe marudzi exotic.
Chero chero pfupi-pfupi kukanganisa kune fluidity kunoonekwa mukupararira. Izvi zvinoreva mamiriro akadai macroeconomic data kuburitswa, maawa apo kuchinja kukuru kuri munyika kuvharwa, kana panguva huru yemabhangi. Iyo yakakwenenzverwa chiridzwa inobvumira kuona kana kupararira kuchave kwakakura kana kudiki.
- Nhau dzehupfumi
Kusimba kwemusika kunogona kukanganisa kupararira mu forex. Semuenzaniso, ivo vaviri vemari vanokwanisa kuona mutengo wepasichienda pakusunungurwa kwenhau huru dzehupfumi. Saka, izvo zvinopararira zvinokanganiswawo panguva iyoyo.
Kana iwe uchida kudzivirira mamiriro ezvinhu apo anopararira kuenda zvakanyanyisa, saka iwe unofanirwa kuramba uine ziso pane iyo forex nhau karenda. Izvo zvichakubatsira iwe kugara uine ruzivo uye kubata izvo zvinopararira. Sa, data dzepasiripo dzekurima dzeUS dzinounza kudzikisira kwakawanda mumusika. Naizvozvo, ivo vatengesi vanogona kuramba vasina kwavakarerekera panguva iyoyo kuderedza njodzi. Nekudaro, nhau dzisingatarisirwi kana data rakaoma kubata.
- Kutengesa vhoriyamu
Mari ine huwandu hwekutengesa yakakwira kazhinji inowanzopararira yakadai seUS USD. Idzi mbiri hadzi dzakakwira zvakanyanya asi zvakadaro vaviri ava vane njodzi yekuwedzera kupararira pakati pehupfumi nhau.
- Zvikamu zvekutengesa
Kupararira kunogona kuramba kwakaderera panguva dzemisika mikuru senge kuSydney, New York uye London zvikamu, kunyanya kana London neNew York zvikamu zvikaitika kana chikamu cheLondon chazopera. Kupararira kunokanganiswawo nehuwandu hwekuda uye kupihwa kwemari. Yakakura kudiwa kwemari ichaguma nekupararira kwakamanikana.
- Kukosha kweiyo brokeri modhi
Kupararira zvakare kunoenderana nemhando yebhizinesi yemubroker.
Vagadziri vemusika vanonyanya kupa kupararira kwakatarwa.
Mune iyo STP modhi, inogona kuve yakasarudzika kana yakatarwa kupararira.
Mune ECN modhi, isu tine chete musika kupararira.
Dzese idzi mhando dze broker dzine zvadzo zvakanakira uye zvakaomera.
Ndedzipi mhando dzekupararira dziri mu Forex?
Iyo inopararira inogona kugadzirwa kana kusiyanisa. Kunge, indices yakarongedza kupararira zvakanyanya. Iyo inopararira ye Forex pairs inosiyana. Nekudaro, kana iyo bhata uye kubvunza mitengo kuchinja, iyo kupararira zvakare inochinja.
1. Yakagadziriswa kupararira
Izvo zvinopararira zvakaiswa neve broker uye hazvichinje zvisinei nemamiriro emusika. Ngozi yekusagadzikana kwemagetsi iri parutivi rwemabroker. Nekudaro, ivo broker vanoramba vakakura vachipararira mune iyi mhando.
Musiki anogadzira kana anobata tafura tafura Vatengesi vakadaro vanotenga zvinzvimbo zvakakura kubva kune vanopa mari uye vanobva vapa iwo nzvimbo muzvikamu zvidiki kune vatengesi vekutengesa. Iwo mabroker anoita seanopindirana nawo kune vatengesi veavo. Nekubatsira kwedare rekubata, ivo forex broker vanokwanisa kugadzirisa avo vapararira sezvo vachikwanisa kudzora mitengo iyo inoratidzwa kune vatengi vavo.
Sezvo mutengo uchiuya kubva kune imwechete sosi, saka, vatengesi vanogona kazhinji kutarisana nedambudziko revanokumbira. Pane dzimwe nguva apo mitengo yezvipenga dzemari inochinja nekukurumidza pakati pekusagadzikana kwakanyanya. Sezvo kupararira kuchiramba kuchichinja, broker haazokwanisi kuwedzera kupararira kuitira kuti agadzirise mumamiriro ezvinhu epamusika pari zvino. Naizvozvo, kana iwe ukaedza kutenga kana kutengesa nemutengo chaiwo, broker haatenderi kuisa rairo pane kuti broker achakukumbira kuti ugamuchire mutengo wakadikanwa.
Iyo meseji yeaidikanwa inoratidzwa pane yako yekutengesa skrini kukuzivisa iwe kuti mutengo wafamba uye kana iwe uchibvuma kugamuchira mutengo mutsva kana kwete. Iyo inowanzo mutengo wakaipisisa pane yako mutero wakarairwa.
Kana mitengo ikafamba zvakanyanya, unogona kutarisana nenyaya yekushomeka. Iye broker anogona kunge asingakwanise kuchengetedza yakatarwa uye mutengo wako wekupinda unogona kunge wakasiyana nemutengo wako waunoda.
Mune mhando iyi, kupararira kunouya kubva kumusika uye broker inobhadharisa mabasa ayo pamusoro payo. Mune ino kesi, broker haina njodzi nekuda kwekudzivirira kwemagetsi. Vatengesi vanowanzo farira kupararira kunze kwekushanduka kwemisika kusimuka.
Asina-anobata tafura tafura brokers inopa akasiyana anopararira. Vakadaro mabhureki vanowana mutengo wekutenga wemari pari kubva kune vakawanda vanopa mari uye vafambi vacho vanotengesa mitengo zvakananga kune vatengesi pasina kupindira kwedhesiki rekubata. Zvinoreva kuti ivo havana simba pamusoro pekupararira uye kupararira kuchawedzera kana kuderera zvichienderana nekushomeka kwemusika uye kugovera uye kudiwa kwemari.
Kufananidza kwekugadzika uye kwakapararira kunopararira
Zvimwe zvezvakanaka nezvakaipa zvekupararira kwakasarudzika uye zvinosarudzika zvinokurukurwa sezvizvi:
Mamwe mabhenefiti uye kukanganisika kweaya maviri marudzi ekupararira anotsanangurwa pazasi:
Kupararira Kunogona Kuitika
Ngozi yeanokumbira haipo
Mutengo wekuchinjana unofungidzira
Mutengo wekuchinjana haungogarofungidzirwa
Zvinodiwa zvemari idiki
Mari inodiwa inokwana.
Inokodzera kune vanotanga
Inokodzera vatengesi vepamberi
Musika wakasimba haukanganisa kupararira
Kupararira kunogona kukwidziridzwa pane dzimwe nguva dzepadenga
Anopararira sei kuyerwa mu Forex kutengeserana?
Iko kupararira kunoverengerwa mukati memutengo mutengo nekupedzisira nhamba huru yekubvunza uye mutengo wekubhidha. Nhamba dzekupedzisira dzakakura ndi9 uye 4 pamufananidzo uri pazasi:
Iwe unofanirwa kubhadhara iyo yakapararira kumusoro iwe unotengesa kuburikidza neCFD kana kuparadzira account yekubheja. Izvi zvakafanana nevatengesi vanobhadhara komisheni apo kutengesa kunogovana maCFD. Vatengesi vacho vanobhadhariswa mari yekupinda uye kubuda kweiyo yekutengesa. Kupararira kwakasimba kwakanakira vatengesi.
Semuyenzaniso: Mutengo wekubhadharisa wePDP / JPY pair ndeye 138.792 nepo mutengo wekubvunza uri 138.847. Kana iwe ukabvisa 138.847 kubva pa138.792, iwe unowana 0.055.
Sezvo yekupedzisira nhamba huru yemutengo quote ndiyo hwaro hwekupararira; saka, iyo kupararira yakaenzana 5.5 pips.
Chii chinonzi hukama hwemajini nekupararira?
Iwe unogona kunge uine njodzi yekugamuchira margin kufona kana iyo forex ichipararira zvakanyanya kuwedzera uye yakaipisisa mhaka iri, zvinzvimbo zvichingozvidzikiswa. Nekudaro, yekufona yemargin inoitika chete kana kukosha kweakaunti kudonha pazasi pe100% margin kudikanwa. Kana iyo account ichisvika pazasi makumi mashanu muzana, zvese zvako zvinzvimbo zvichangoiswa zvoga.
Kupararira kwe Forex ndiko kusiyana pakati pemutengo wekubvunza uye mutengo wekubhadharisa wega Forex. Kazhinji, ino kuyerwa mu pips. Izvo zvakakosha kuti vatengesi vazive izvo zvinhu zvinopesvedzera kusiyana kwekupararira. Yakakura mari ine yakakwira yekutengesa vhoriyamu; nokudaro kupararira kwavo kwakadzikira nepo vaviri vekunze vakapararira nepakati pakuderera.